Igbe Ọganihu: Ndekọ 2020 na-eduga na nkwụsị na-ada n'ihi na Corrugated Packaging Industry
N'ụtụtụ ụbọchị opupu ihe ubi, Ken Dunn weputara nnukwu katọn na ngwaahịa ndị ọzọ na akwụkwọ mpempe akwụkwọ na mpaghara South Side nke ọ na-arụ ọrụ. Dunn na-agba ọsọ Resource Center, otu ọrụ anaghị enyere aka na mpaghara Chicago ọtụtụ afọ. “Anyị malitere n’ezie site n’inyere ndị ọrụ aka iburu kom kom na karama na vac ...
Corrugated nkwakọ igbe eso ihu akụrụngwa na-eri ujo
Kolkata: industrylọ ọrụ na-ahụ maka igbe akwụkwọ akwụkwọ na-eche nsogbu ihu ka ọnụahịa nke akụrụngwa ejirila 30-35 pasent gbaghaa na-atụ egwu ịtụgharị azụmahịa ahụ, otu onye ọrụ ụlọ ọrụ kwuru. N'India, enwere ihe dị ka ndị na - arụ ọrụ akpaka 350 na ihe karịrị 10,000 nkeji akụrụngwa gafee akwa ...
Ebe a na-emegharị Republic Republic na Plano, Texas. Onyinye sitere n'aka Republic Services
Ọrụ Republic wepụtara data na-emegharị ọrịa na-egosi mmụba dị ukwuu na imegharị igbe katọn, ite aluminom na karama na karama iko n'afọ gara aga, na-egosipụta ngbanwe nke omume ndị ahịa na-erikwu nri n'ụlọ. A hụrụ nke ọma ọrịa a ...
Bag Nkwado, Nkwalite Onyinye, Lamination Onyinye Box, Corrugated Carton Box, Igbe Onyinye, Igbe Onyinye Ngosiputa Ngwa,